ओलीको हर्कत कांग्रेसले बुझ्यो, बन्यो शक्तिशाली योजना
२ मिनेट अगाड
काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म मौलाएको उपत्यकाको गुण्डागर्दी एकाएक बढेर गएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा ठमेल, नयाँ बसपार्क, दरबारमार्ग र गोंगबु क्षेत्रमा गुण्डागर्दी बढ्दै गएको छ । केही समयअघि ठमेलको एलओडी डिस्कोमा झगडा हुँदा सोह्रखुट्टे बृत्तका इन्सपेक्टर शंकर श्रेष्ठले गुण्डागर्दीमा संलग्न अभिषेक शेरचनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न खोजेका थिए । तर, महानगरीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पालले उल्टै क्लव सञ्चालक राजु सिंह (माइला)लाई...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफू निकटका नेताहरुको भेला गरेर औकात देखाउन थालेका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार बसेको शेखर समूहको भेलाले सभापति एवम्...
काठमाडौं । महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराका भाई प्रभुशम्शेर जबराका विभिन्न हर्कतहरुका सूची बाहिरिन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला चोलेन्द्रशम्शेरको नाम र...
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अड्काइदिएको छ । संसद सचिवालयमा बुधबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमालेका सांसद...
प्रतिभा सहकारीका अध्यक्ष ललितपुरबाट पक्राउ, माओवादीका दुई मन्त्री डरले थरथर
सभापति रवि लामिछानेको कर्तुतले एमालेका विष्णु पौडेल पनि चकित
त्रिभुवन विमानस्थलमा जजिराको जहाज दुर्घटनबाट बच्यो, अधिकारी–ठाकुरको ठूलो लापरबाही
काठमाडौंको स्काईवाकमा ओलीका सल्लाहकारको लगानी
यस्तो छ कांग्रेस नेतृ डा.आरजु राणाको मामाको गाउँ र घर, पहिलो पटक पुगिन् राखु (तस्बिर)
आले ग्याङको च्याप्टर क्लोज, एकीकृत समाजवादीद्वारा भाँडभैलो गर्ने ४ केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही
२ घन्टा अगाड
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ५६ जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । बढुवा समितिले बिहीबार प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३९ को उप नियम १ को ‘ग’ बमोजिम उनीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरिएको हो । बढुवा सिफारिसमाथि चित्त नबुझे...
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा अवैध रुपमा काम गरिरहेका १३ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । दक्षिण कोरियाको अध्यागमन ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपालीहरु...
बाह्रबिसे । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चुनावमा पार्टीविरुद्ध घात गर्ने कार्यकर्ताहरु आपराधिक धमिरा सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।...
हेटौँडा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मुख्यमन्त्री बनेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन शुरु गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पास भए...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । बैठक असार २७ गते बस्नेछ । दिउँसो १ बजे पार्टी मुख्यालय वीपी स्मृति...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ सवारी गाडी ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ । बिहीबार रामेछाप जिल्लाको गोगनेमा उपसभापति गुरुङ चढेको स्कारपियो गाडी...
गढवा । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्ना बुबा र आमासँग आशीर्वाद लिँदै मतदाताहरुलाई धन्यावाद दिएका छन् । मन्त्री पदको शपथ लिएर पदभार ग्रहण...
१ िन अगाड
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ४१ वर्षीया वविता पन्त पौडेललाई पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसूर मुद्दाकी फरार प्रतिवादी काठमाडौं महानगरपालिका–२ बस्ने चितवनको शिवनगर घर भएकी ववितालाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनको २०७१ माघ २९ गतेको फैसलाले १ महिना कैद र...
६ दिन अगाड
२ हप्ता अगाड
राजु–करुणको स्वरमा हप्ताकै उत्कृष्ट गीत ‘गुन्द्रुक तिउन’ रिलिज, पाण्डेको निर्देशन
काठमाडौं । गायक राजु परियार र गायिका करुणा राईको स्वरमा ‘गुन्द्रुक तिउन’ बोलको लोक दोहोरी गीत रिलिज भएको छ । गीतको म्युजिक भिडियोलाई देवेन्द्र पाण्डेले निर्देशन गरेका छन् । गीतको म्युजिक भिडियो राम्रो बनाउने प्रयास गरिएको पाण्डेले बताएका छन् ।...
सन्तोष र शान्तिश्रीको स्वरमा उत्कृष्ट गीत रिलिज, ‘फुर्के मदानी’ले दर्शकको मन जित्न थाल्यो
खेम सेञ्चुरी–सुनिल क्षेत्रीको उत्कृष्टि गीत र नृत्य, युट्युबको ट्रेण्डिङमा उत्पात मच्चायो
‘सुन माया’मा पाण्डेको निर्देशन, रवि र बेनीषाको स्वर
यस्ता छन् नायिका अप्सराका अर्धनग्न तस्वीरहरू
माधुरीका यी तस्वीरहरूले हलचल ल्याइदियो
समुद्रको तटमा अर्ध नग्न नायिका (तस्वीर)
लण्डन । सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो खेलमै पराजित भएकी छिन् । सोमबार राति भएको खेलमा सेरेना पहिलो चरणमा फ्रान्सेली खेलाडी हार्मोनी...
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले ‘४४औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता’मा नेपाल एपीएफ क्लवका पदक विजेता खेलाडीहरूलाई...
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई अध्यक्षमा पराजित हुनेवित्तिकै भाग्ने व्यक्तिले...
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाँडेलाई स्वागत गर्दै सफल...
४ दिन अगाड
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा ‘स्काईवाक’ (सिसाको पुल)मा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका सल्लाहकारको पनि लगानी रहेको छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन झण्डै दुईतिहाईको सरकारका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाले स्काईवाकमा लगानी गरेका छन् । ८ भदौ २०७५, शुक्रबार गरिएको...
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्यो, देउवाले दिए जनतालाई राहत
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ । इन्धनको मूल्य घटेसँगै विभागले भाडाा घटाएको हो । स्वचालित प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन...
पेट्रोल प्रतिलटर १९९ पुग्यो, तेलको भाउ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । आइतबार निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपियाँले वृद्धि...
भैरहवामा वैदेशिक रोजगार शाखा स्थापना
भैरहवा । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सुविधाका लागि भैरहवामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरिएको छ । बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री किसान...
क्लासिक टेकको ‘नेक्स्ट जेनेरेशन’ वाइफाइ शुरु
७ महिना अगाड
काठमाडौं । क्लासिक टेक नेक्स्ट जेनेरेशनको प्रविधी वाइफाइ ६ को साथमा तक्षम वान जीबीपीएस इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । क्लासिक टेकले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमै पहिलो पटक वाइफाइ ६ का साथमा तक्षक १ जीबीपीएस इन्टरनेट प्रविधि भित्राउन लागेको जनाएको...
यस्तो छ सामसङको फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ फोन
काठमाडौं । सामसङले फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ फोन ल्याउने भएको छ । सामसङले अगस्ट ११ तारिखमा नयाँ फोन सार्वजनिक गर्नेछ । अगस्ट ११ मा भर्चुअल...
रसियन ग्रुपद्वारा एप्पलको डाटा ह्याकिङ्ग
न्युयोर्क । रसियन ह्याकिङ्ग समूहले एप्पल कम्पनीसँग ६ अर्ब फिरौती माग गरेको छ । कम्पनी तथा आफ्ना प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिने एप्पलसँग ह्याकरहरूले...
न्युयोर्क । एप्पलले आफ्नो नयाँ संस्करणको आइप्याडसँगै एप्पल वाचसार्वजनिक गरेको छ । एप्पलले सार्वजनिक गरेको आइप्याड एयर उसको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली आइप्याड हुनेछ । आइप्याड...
नाकलाई मात्र मास्क
सोल । दक्षिण कोरियाले नाक मात्रै छापिने अनौठो मास्क तयार गरेको छ । एटम्यान नामक कम्पनीले यस्तो अनौठो मास्क बनाएको हो । मास्कले नाक मात्र छोप्दछ । यो मास्क लगाएपछि मुख खुल्ला रहन्छ । त्यसैले यसलाई मास्क नभनी कोस्क नाम...
जहाजको नोजलमा बसेका मान्छे जीवित फेला
मङ्कीपक्स रोग के हो ? कसरी बच्ने ?
१ महिना अगाड